केपी ओलीले आफ्ना गुटलाई मात्र काखि च्यापेपछि माधव नेपालसंग बैठकमा भयो भनाभन ! « Light Nepal
केपी ओलीले आफ्ना गुटलाई मात्र काखि च्यापेपछि माधव नेपालसंग बैठकमा भयो भनाभन !
Published On :7June, 2019 8:36 am
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपामा जिल्लाको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच टक्कर परेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन । ओली जनप्रतिनिधिहरुलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिन चाहन्छन् भने नेपाल त्यसको विरुद्धमा छन् । तीन दिन सम्म भएको बैठक र छलफलले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि बैठक असार सम्मका लागि पर सरेको छ ।
केन्द्रीय नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनुपर्ने ओलीको प्रस्तावले विवाद बढाएको हो । सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्तावमा विमति जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कडा टक्कर दिए पछि बैठक लम्बिएको
हो । सचिवालय बैठक तीन दिन बसे पनि जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्जार्च तोक्न नेकपा असमर्थ बनेको छ ।
अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले भूगोलका ७७ वटा जिल्लाको इन्चार्ज र सहइन्चार्जका लागि प्रस्ताव गरेका नाममा नेता नेपालले असहमति जनाएका छन्। ओली र दाहालले बिहीबार बिहान पनि नेपालसँग सहमतिको प्रयास गरेका थिए । छलफलमा ओली र नेपालबीच भनाभनै भएको स्रोत बताएको छ ।
नेपालले राज्यसत्ता र पार्टीको स्रोतसाधन प्रयोग गरी गुट चलाउन आफ्ना मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको आरोप लगाएर कड्किए । ‘कुन मापदण्डअनुसार प्रस्ताव ल्याउनुभयो, के तपाईंको गुटको भए पुग्यो ? गुटलाई बलियो बनाउन राज्य र पार्टी दुवैको स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने ? ’, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एकथरी साथीहरू दोहोरो, तेहरो जिम्मेवारीमा बस्ने, एकथरी साथीहरु खाली हात बस्ने कुरा मिल्दैन ।’
दुवै नेता अडानमा रहेपछि सचिवालय बैठक असार पहिलो सातासम्मका लागि धकेलिएको छ।प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्र बैठक बस्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।